FBC - Itiyoophiyaatti namoota waggaa waggaan kaansarii harmaan hubaman kuma 13 keessaa dhibbantaa 53 du’aaf saaxilamu jedhame
FBC Dilbata Adooleessa 15 2010 E.C. - Sunday, July 22 2018 G.C.
Doolaarri Ameerikaa kumni 570 seeran ala imalaa ture qabame
Ameerikaan humna waraana Yuukireenif Doolaara miliyoona 200 deeggarsaan kennufi
Yuunvarsiitin Riift Vaalii barattoota kuma 8 eebbisiise
Sammaraa Ruusom ItyoophiyaattiAmbaasaaddara Eertiraa ta’uun muudaman
Haamaasii fi Israa'eel Gaazatti nagaa buusuuf waliigalan
Itiyoophiyaatti namoota waggaa waggaan kaansarii harmaan hubaman kuma 13 keessaa dhibbantaa 53 du’aaf saaxilamu jedhame
Finfinnee, Fulbaana 30, 2010 (FBC) Itiyoophiyaatti namoota kuma 13 waggaa waggaan kaansarii harmaaf saaxilaman keessaa kuma 7 kan ga’an akka du’an Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksise.
Hawaassichi hubannoon doronyoo harmaaf qabu hanqachuun, dhaabbilee fayyaa wal’aansicha kennan gahaa ta’uu dhiisuun, dhibicha salphaatti ittisuun akka hin-danda’amne gochuusaa ministeerichi beeksiseera.
Kaansariin harmaa jalqaba harma irratti mul’achuun kutaalee qaamaa kaanitti tatamsa’uun dhibee du’aaf kan nama saaxilu yoo ta’u, ijoodhaan dubartoota kan hubu ta’us darbee darbee dhiirotas nihuba.
Itiyoophiyaatti waggaa waggaan namoonni kuma 13 kaansarii harmaaf kan saaxilaman yoo ta’u, isaan keessaa kuma 7 kan ga’an akka du’an ragaan Ministeera Eegumsa Fayyaa irraa arganne ni-eera.
Baatiin Onkololeessaa sadarkaa Idil-addunyaatti baatii kaansarii harmaa ilaalchisee hubannoon itti qabsiifamu ta’ee tura.
Kana ilaalchisanii Ministeerri Eegumsa Fayyaa waajjira Giiftii Duree waliin ta’uun ibsa kennaniin hawaasichi hubannoon waa’ee dhibichaa qabu gahaa waan hin-taaneef saaxilamummaa isaa hir’isuun akka hin-danda’amne ibsameera.
Ministirri Eegumsa Fayyaa Piroofeesar Yiftruu Birihaane Itiyoophiyaan biyyoota guddataa jiran dhibee kanaan hubaman keessa tokko ta’uushee eeranii, hubannoon hawaasichaa hanqachuun rakkoo ijoo ta’uu ibsaniiru.
Sababoota Kaansarii Harmaa fidan
• Sochii ga’umsa qaamaa hojjachuu dhiisuu
• Harma hoosisuu dhiisuu,
• Tamboo xuuxuu
• Alkoolii dhuguu dawaawwan hoormoonii waliin wal-qabatan fudhachuu
• Dafanii da’uu dhiisuu fi sababaoonni kaan kaansarii harmaaf kan nama saaxilanidha.
Saaxilamummaa kaansarii harmaa hir’isuuf
• Guyya guyyaan sochii ga’umsa qaamaa hojjachuu
• Waggaa 1 hanga 2 harma hoosisuu
• Umurii 20 hanga 30 gidduu jirutti da’uun saaxilamummaa isaa qabnu hir’isuun akka danda’amu Piroofeesar Yifruun himaniiru.
Kaansariin harmaa qorannaan isaas ta’e wal’aansi isaa baasii guddaa waan gaafatuu fi lubbu dhabsiisuu waan danda’uuf hawaasni qoratamuun of eeggachuu akka qabu hubachiisaniiru.
Ministeerichis tarsiimoo too’annaa kaansarii biyyaalessaan geggeffamaa akkuma dhibee kamiiyyuu ittisuu irratti xiyyeeffachuuf hojii hubannoo qabsiisuu hojjataa jira jedhaniiru.
Qorannoo duraan yoo danda’ame dursanii ittisuuf, yoo ta’uu baates dhibicha dursanii beekuun wal’aansa akka argatan taasifamaa akka jiru ibsaniiru.
Ministirichi wayita ammaa hospitaalotni mootummaa 12 wal’aansa kennaa akka jiran eeranii, wiirtuuwwan wal’aansaa hanqina hir’isuuf wiirtuuwwan wal’aansaa ja’a ijaaramaa akka jiran ibsaniiru.
Dhaabbileen wal’aansaa dhuunfaa wal’aansicha akka kennan gochuuf hojjatamaa akka jiru kan ibsan ministirichi isa cinatti ogeeyyii waa’ee dhibichaa leenjisuun akka qoratanii fi wal’aansa akka kennan taasifamaa jira jedhaniiru.
Baatiin hubannoo qabsiisuu baranaa Itiyoophiyaatti mata duree “Dhibee Kaansarii Harmaa Ittisuun Itti-gaafatamummaa Hunda Keenyaati, Harma Keessan Qaqqabattanii Qorannoo Duraa Rawwachuun Lubbuu Keessan Oolchaa” jedhuun si’a 11ffaaf kabajama.
Oduuwwan Biroo « Halluuwwan miidhaginni hidhii itti-eegamu sobaa miidhaa fayyaa hamaa waan geessisaniif of eeggannoo gochuu barbaachisa	Furdinni qaamaa gar-malee daa’immanii fi saafilaa sadarkaa addunyaatti babal’ataa jira: qorannoo »